Dowladda Federaalka Soomaaliya oo la wareegtay ciidamada Booliska Puntland – Radio Daljir
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo la wareegtay ciidamada Booliska Puntland
Diseenbar 25, 2018 4:56 b 1
Dowladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa la wareegtay ciidamada booliska iyo daraawiishta Puntland, kaddib markii todobaadkan ay soo gaareen Puntland wafdi kasocda dowladda faderaalka Soomaaliya oo tirakoobaya ciidamada booliska ee Puntland.
Radio Daljir ayaa ogaaday in la xareeyey dhammaan ciidamada bilayska Puntland ee ku sugan gobolada, kuwaasi oo magacyadooda iyo taleefanadooda la diiwaangeliyay, loona sameyey kaarar ay ku qaataan mushaaraadka ciidamada.
Qorshaha ayaa ah ciidamada inay mushaaraadka ka qaataan akoono bankiyada dalka ka howlgala , kuwaasi oo ay ku qaadanayaan kaarar aqoonsi oo la siiyay.
Saraakiil kasocda dowladda faderaalka oo wada tirokoobka ayaa horay usoo maray magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe, Carmo, ciidamada ku sugan jiidda hore Tukaraq, waxaana hadda la diiwaangelinayaa ciidamada bilayska ee Bosaso.
Madaxwaynayaashii hore Puntland ayaa marar badan ka horyimid qorsheyaal hay’adda UNDP iyo dowladihii KMG ee dalka soo maray ku doonayeen inay kula wareegaan ciidamada Puntland mushaaraadna ay u siiyaan, xukuumadahaasi ayaa badankooda dalbanayay mushaaraadka in iyaga lasoo marsiiyo, haddii aan sidaasi la yeelina aan qorshahan ka hanaqaadi karin Puntland, waxaana ay ku sababaynayeen in askariga uu mar walba hoostago qofka markaasi mushaarka bixinaya.
Madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa khilaafka ka dhaxeeyey bilihii lasoo dhaafay waxaa uu salka ku hayay in qoondadada magaca Soomaaliya lagu soo qaado in lagu koobo gobolka Banaadir iyo deegaano tirsan, loona baahanyahay in dalka oo dhan si siman loo gaarsiiyo.
Xukuumadda Madaxwayne Cabdiwali Cali Gaas ayaan illaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin qorshaha hadda socda ee DFS, lamana oga in ay wax kala socoto qorshahaas iyo in kale.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 406 Wararka 13395
Farriin siyaasadeed 2018-2019: Olalaha Musharrax Madaxweyne Kuxigeen Camey – Camey & Ammaanka Puntland
Farriin siyaasadeed 2018-2019: MWKX Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar Camey – Waxqabadkiisii Abaartii Sima ee Puntland
Joji 4 months
Mesha in wax kujiran ayan lajeclaha. Qatar tedey ledaha tira koob kan iyo waxa lashegayo. Dowladaha shisheye e mamula dowlada somaliyed aya arin kan wata hadi loodhaga nuglado dhib wayna ka iman kara.